Slotsltd များအတွက်ရရှိနိုင်သိုက်နည်းလမ်းများ	Slotsltd များအတွက်ရရှိနိုင်သိုက်နည်းလမ်းများ
> SlotsLtd.com မူလစာမျက်နှာ | အပ်ငွေ
ငွေသွင်းရန်သင် SlotsLtd.com တွင်ကစားရန်ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ပုံတင်ရမည်။
သင်မှတ်ပုံတင်ပြီး login ပြီးတဲ့အခါအောက်ဖော်ပြပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်စစ်မှန်သောငွေအတွက်ကစားရန်သင်ငွေသွင်းနိုင်လိမ့်မည်။
"ငွေကိုင်" အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးလျှင် 'ငွေသွင်းခြင်း' option ကိုနှိပ်ပါ။
သက်ဆိုင်သည့်ပုံစံကိုရွေးချယ်ထားသည့်အပ်ငွေအတိုင်းဖြည့်ပါ၊ အပ်ငွေကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်ရွေးချယ်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုကောက်ခံပါမည်။
SlotsLtd.com သည်သင်၏ဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံး ၀ လုံခြုံမှုရှိစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်စာဝှက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
သင်ရွေးချယ်နိုင်သောသိုက်အမျိုးအစားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အသေးစိတ်အတွက်
Olorra Management Limited သည် SlotsLtd.com သို့ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်
ကစားသမားအကန့်အသတ်နှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်း - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
လက်ငင်း£ / € / $ / ¥ / ₹
Visa၊ Visa Debit၊ Visa Electron၊ Visa Delta၊ Mastercard, Maestro, JCB, Solo, Switch, Diners Club နှင့် Discover စသည့်ကွဲပြားသောခရက်ဒစ်နှင့်အကြွေးကဒ်အမျိုးမျိုးမှအပ်ငွေများကိုလက်ခံပါသည်။
သင်၏ဒက်ဘစ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်ကို သုံး၍ ငွေကြေးအမြောက်အမြားငွေလွှဲ
တစ်ပြိုင်နက်တည်းငွေလွှဲခြင်းကိုသင်၏ SlotsLtd.com အကောင့်တွင်ချက်ချင်းရရှိနိုင်သည်
ငွေပေးချေကဒ်လုပ်ငန်းဒေတာလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်း (PCI DSS) နှင့်အပြည့်အဝလိုက်နာသည်
ဆက်သွယ်ရန် & Support: သင့်ရဲ့အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်ပြissuesနာများအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုဆက်သွယ်ပါ.
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - သင်၏ခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်ကို သုံး၍ ငွေကိုငွေသွင်းနိုင်သည်။
လက်ငင်း£ / €
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - သင်၏ PayPal အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ SlotsLtd.com အကောင့်ကိုငွေဖြည့်ပါ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းငွေလွှဲခြင်းကိုသင်၏ SlotsLtd.com အကောင့်တွင်ချက်ချင်းရရှိနိုင်သည်။
PayviaPhone သည်မျိုးဆက်သစ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပံ့ပိုးသူမှငွေတောင်းခံခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်ကူစွာငွေသွင်းနိုင်သည်။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ: £ 10 ။
က 15% အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေ PayviaPhone မှပြုလုပ်သောအပ်ငွေအားလုံးမှနှုတ်ယူလိမ့်မည်။
လက်ငင်း£ / € / $ / CAD$
Paysafecard သည်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုအတွက်ဥရောပ၏ပထမဆုံးကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ပေးသောအွန်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုကဒ်တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥရောပရှိဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ဘဏ်များနှင့်အခြားဆိုင်များတွင်အပါအဝင်ကဒ်ကိုသယ်ဆောင်သည့်ဥရောပရှိဆိုင်ခန်း ၁၀,၀၀၀ အနက်မှတစ်ခုတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ paysafecard ၏ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ငွေသားကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္financialာရေးအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တတိယပါတီနှင့်မျှဝေရန်မလိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.paysafecard.com သို့ဝင်ရောက်ပါ။
အပ်ငွေကန့်သတ်ချက် - အနိမ့်ဆုံး: £ / € / $ / CAD$ 10, အများဆုံး: £ / € / $ / CAD$ 700
သင်၏နိုင်ငွေကို paysafecard ဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေးချေပါ။
လက်ငင်း£ / € / $
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ရောင်းချတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဆောင်ရွက်ပြီးအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုများကိုတတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေလွယ်ကူ၊ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်းကျင်အတွင်းငွေပေးချေရန်ယုံကြည်စိတ်ချစွာခွင့်ပြုသည်။ ပိုမိုသောအချက်အလက်များကို https://trustly.com/en/ တွင်ရှာဖွေပါ။
အပ်ငွေကန့်သတ်ချက် - အနည်းဆုံး£ / € / $ 20, အများဆုံး: £ / € / $ 700
လက်ငင်း£ / € / $ / CAD$ / ₹
ecoAccount ဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိငွေများကိုအွန်လိုင်းအကောင့်တစ်ခုတွင်လက်ခံရရှိခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်သမာဓိသည်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေမည်သို့မည်ပုံ - Ecopayz ဖြင့်အခမဲ့အွန်လိုင်းအကောင့်ဖွင့်ပြီးသင်၏အကောင့် ID ကိုငွေသွင်းရန်။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ: £ / € / $ / CAD$ / ₹ 20 ။
လက်ငင်း CAD $
Interac Combined သည်သင်၏ online banking ၀ န်ဆောင်မှု၏လုံခြုံရေးအတွင်းမှငွေပို့ရန်လျင်မြန်။ လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကနေဒါဖောက်သည်များအတွက်သာရနိုင်သည် Interac Combined သည် 'Interac Online' နှင့် 'Interac e-Transfer' တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
အနိမ့်ဆုံးသိုက် - CAD $ 20 ။
BitBay Pay သည် Crypto အသုံးပြုသူများကိုပုံမှန် Fiat ငွေကြေးများအတွက် Crypto ဖလှယ်ခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုကူညီရန်ဒီဇိုင်းထုတ်သည့်ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်စာမျက်နှာရှိငွေသွင်းခြင်းကိုနှိပ်ပါသင်အသုံးပြုလိုသောငွေကြေးကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်တွင်လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးရှိပါကအမြန်ငွေပေးချေရန်အတွက်လုံခြုံသောကုဒ်ကိုသာစစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သို့ငွေပမာဏနှင့်ပေးချေမှုလိပ်စာကိုသာကူးယူပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
BitBay Pay သည်ယူကေမှကစားသမားများအတွက်မရနိုင်ပါ။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ - $ 20 ။
NETeller သည်လျင်မြန်။ အလွန်အမင်းလုံခြုံသောအွန်လိုင်းငွေပေးငွေယူဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးသင်၏ SlotsLtd.com အကောင့်ထဲသို့ချက်ချင်းငွေသွင်းနိုင်သည်။
ဝဘ်ဆိုက် https://www.neteller.com ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်၊
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - သင်၏ NETeller အကောင့်ကို Credit Card (ကဒ်ငွေပေးချေမှုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်သည်)၊ Online Check (EFT)၊ InstaCASH နှင့် Bank Wire သုံး၍ သင်ငွေပေးနိုင်သည်။
အပ်ငွေကန့်သတ်ချက် - အနည်းဆုံး£ / € / $ / CAD$ 20, အများဆုံး£ / € / $ / CAD$ 5000 (NETeller မှနောက်ထပ်ကန့်သတ်ချက်များသက်ရောက်နိုင်သည်)
လက်ငင်း€ / $
Skrill သည် Moneybookers အတွက်နာမည်သစ်ဖြစ်ပြီးအင်တာနက်မှငွေလွှဲခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်
နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်ဘာသာစကား ၁၂ ခုနှင့်ပြည်တွင်းငွေပေးချေမှုစနစ်များပါ ၀ င်သောဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှု
ဆက်သွယ်ရန် & Support: at support center တွင်အီးမေးလ်အထောက်အပံ့ကိုရနိုင်သည် www.skrill.com
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - သင်၏အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်ဘဏ်အချက်အလက်အားလုံးကို Skrill တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးအွန်လိုင်းဆိုင် ၂၀၀၀၀ ကျော်တွင်ငွေပေးချေရန်သုံးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်လိုသည့်အခါတိုင်း၎င်းတို့ကိုထောက်ပံ့ရန်မလိုအပ်ပါ။
UPI သည်အိန္ဒိယတွင်အသုံးပြုသောလုံခြုံစိတ်ချရသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များအားအိန္ဒိယရှိပူးပေါင်းဘဏ်များမှတစ်ဆင့်ငွေလွှဲနိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပြီးအပ်ငွေကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ထူးခြားသော UPI အမှတ်အသား (VPA) ကိုရိုက်ထည့်ပြီးညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
NetBanking သည်အိန္ဒိယတွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောလုံခြုံစိတ်ချရသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များအားအိန္ဒိယရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဘဏ်များထဲမှတစ်ဆင့်ငွေလွှဲနိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပြီးအပ်ငွေကိုနှိပ်ပါ။ Drop down စာရင်းမှသင်၏ဘဏ်ကိုရွေးပြီးသင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်၍ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Fast BankTransfer သည်ပုံမှန်ဘဏ်ငွေလွှဲဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများကိုဘဏ်အကောင့်မှတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - ငွေရှင်းကောင်တာစာမျက်နှာပေါ်တွင် Fast BankTransfer ရွေးစရာကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးငွေသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ။
အပ်ငွေကန့်သတ်ချက် - အနည်းဆုံး€ / $20၊ အများဆုံး: € / $5000
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ဖော်ပြထားသော Euteller ရွေးစရာကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးအပ်နှံထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာပါ။
အပ်ငွေကန့်သတ်ချက် - အနည်းဆုံး£ / € / $20, အများဆုံး: £ / € / $5000
သင်၏နိုင်ငွေကို Euteller နှင့်အလွယ်တကူငွေပေးချေပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကခေါ်ပါ။ +358 (0) 400 564008
ငွေသွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြhaveနာများရှိပါကစိတ်မပူပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားသည့် Customer Service ကိုယ်စားလှယ် ၂၄/၇ ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Olorra Management Limited သည်မည်သူနည်း။
လုံခြုံသောအင်တာနက်ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ Olorra Management Limited သည် SlotsLtd.com သို့ငွေပေးငွေယူ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
SlotsLtd.com အဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏ဂိမ်းအကောင့်များတွင်ငွေသွင်းသောအခါ Olorra Management Limited သည်ပရိုဆက်ဆာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်သင်၏အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုငွေတောင်းခံလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုကိုသင်၏ဖော်ပြချက်တွင်အောက်ပါအမည်တစ်ခုအောက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
အထက်ပါအမည်များသည်တခါတရံမြို့၏အမည်နှင့်အတူပေါ်လာနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ Olorra Management Limited သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ဘဏ်စနစ်တံခါးပေါက်များစွာရှိသည်။